Wax ka ogow mowqifka Cirro ee kulankii Farmaajo iyo Biixi - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Wax ka ogow mowqifka Cirro ee kulankii Farmaajo iyo Biixi
Wax ka ogow mowqifka Cirro ee kulankii Farmaajo iyo Biixi
Cabdiraxmaan Cirro, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee Waddani ayaa maanta dib ugu laabtay Hargeysa kadib safar shaqo uu dibadda ugu maqnaa.
Intii lagu guda jira shirka jaraa’id, Cirro ayaa caddeeyay in ay Biixi “isku aragti” ka noqon waayeen doorashada iyo kala dirista guddiga lagu muransan yahay ee doorashada.
“Dalka doorasho la’aan kusii socon maayo, Somaliland-na doorasho la’aan kusii jiri meyso aniguna masii joogi karo doorasho la’aan, Muuse-na ma joogayo doorasho la’aan, guusha doorashada in la qabtay madaxweynaha ayaa yeelan doona, guuldarada doorashada in la qaban waayo isagaa yeelan doona,” ayuu Cirro u sheegay koox wariyeyaal ah.
“Qeyb kama ahayn”
Dhanka kale, Cirro ayaa soo hadal-qaadey kulankii madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo Muuse Biixi ku dhexmaray xafiiska ra’iisul wasaaraha Itoobiya.
“Kulanka Farmaajo iyo Muuse annaga koley qeyb kama aanan ahayn, waxaase waajibku yahay saaran madaxweynaha in uu shacbigiisa si daahfuran uga waramo arrintaas, waxaana mowqifka axsaabta qaranku yahay in wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland laga yeesho talo-qaran, axsaabtu qeyb ka yihiin, dhamaan Jamhuuriyadda Somaliland-na ay qeyb ka yihiin,” ayuu ku adkeystay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Somaliland.
Previous articleThe UN Envoy Turned Dog Whistler
Next articleFahad Yasin iyo Dr. Baadiyow oo ka shaqeynaya mideynta Islaax iyo Ictisaam